Dubai Expo: Madaxweynihii hore ee Mareykanka ee xafiiskiisa dhigtay kitaabka Quraanka - Bulsho News
Sidee ayay u shaqeeyaan hubka la adeegsado kolka aflaamta la...
Xigashada Sawirka, EXPO 2020 DUBAI
Nuqul Quraan oo naadir ah oo lagu turjumay luuqadda Ingiriiska oo uu lahaa madaxweynihii saddexaad ee Maraykanka Thomas Jefferson ayaa lagu soo bandhigayaa carwada Dubai Expo 2020.
Waa markii ugu horreysay ee nuqulkan la geeyo meel ka baxsan dalka Mareykanka tan iyo qarnigii siddeed iyo tobnaad.
Waxaa turjumay George Sale oo u dhashay Ingriiska kaas oo ku takhasusay barashada luuqadaha iyo dhaqannada kala duwan.
Nuqulka kitaabka Qur’aanka waxaa loo wareejiyay Dubai isagoo ku jira sanduuq alwaax ah oo ay ku xiran yihiin qalab lagu ilaalinayo, waxaana la socday shaqaalaha maktabadaha, iyo sugaya ammaankiisa. “sida lagu sheegay war -saxaafadeed laga soo saaray Expo 2020 Dubai.
Maxay tahay muhiimaddiisa taariikhiga ah?
Jefferson wuxuu madaxweyne ahaa 1801 ilaa 1809 waxaana la rumaysan yahay inuu danaynayey inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho dunida Muslimka, sababo badan awgood, oo ay ka mid tahay in Morocco ay ahayd tii ugu horraysay ee aqoonsatay madaxbannaanida Maraykanka sannadkii 1777kii.
Xigashada Sawirka, LIBRARY OF CONGRESS, RARE BOOK AND SPECIAL COLLECT
Tixraacyadu waxay tilmaamayaan in Jefferson uu qaabilayay martidiisii ​​diblomaasiyiinta ee Muslimka ahaa si uu ula afuro bisha Ramadaan.
“Inkasta oo uusan had iyo jeer si sax ah u fahmin diinta Islaamka intii uu ku jiray noloshiisa siyaasadeed, haddana wuxuu u doodi jiray xuquuqda siyaasadeed ee Muslimiinta, wuxuuna sheegay inuu daneeyay diinta Islaamka, Qur’aankana uu yahay kitaab sharci ah, waa uu ka duwanaa ‘inta badan Masiixiyiinta Galbeedka waqtigaas marka loo eego fahamka Qur’aanka , “ayuu yiri Spielberg oo ahaa qoraa gaar u ahaa madaxweynaha oo bixiyay wareysi hore oo saxaafadeed ka hor inta usan dhiman.
Waxay u badan tahay in Jefferson uu xiisaynayay Qur’aanka marka laga hadlayo dhisidda xiriirka diblomaasiyadeed, iyo fahamka caadooyinka iyo nolosha Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Waqooyiga Afrika.
Waa maxay muhiimadda tarjumaaddan?
Buuggan oo ka kooban laba nuqul, oo lagu daabacay London sannadkii 1764-kii, ayaa lagu sheegay inuu yahay tarjumaadda macnaha Qur’aanka, ee uusan ahayn tarjumaadda aayadaha, waxaana la sheegay in qoraagii Faransiiska Voltaire uu soo xigtay turjimaaddan markii uu qorayay maqaalladiisii ​​Islaamka iyo Nabi Maxamed NNKH.
Sida laga soo xigtay website-ka “Taariikhda”, iyo turjumaadda ee Ciel waxay ahayd turjumaaddii ugu horraysay ee Qur’aanka ee oo lagu turjumo luuqadda Ingiriisiga.
Xigashada Sawirka, SAUL LOEB/AFP
Sida laga soo xigtay majaladda Smithsonian Institution Magazine, Waxaa markii ugu horraysay ee aayado Qur’aanka ku qoran oo Carabi ah lagu qoro Ameerika qoray nin la yiraahdo Cumar bin Saciid, oo ahaa addoon laga keenay Senegal, gaar ahaan waxaa lagu qoray magaalada Charleston, ee gobolka South Carolina sanadkii 1807.
Cumar waa la xiray, qolkii uu ku xirnaa ayuu ku dhex tukanayay oo darbiyadiisa ku qoray aayado Qur’aan ah isagoo adeegsanaya dhuxul iyo jeesto.
Wuxuu qoray hordhac ka kooban 200 bog oo turjumiddiisa wata, isagoo sharraxaya duruufaha taariikhiga ah ee soo degidda Qur’aanka, wuxuuna si guud uga warramay Carabta iyo Muslimiinta, caadooyinkooda iyo waxay aaminsan yihiin. Laakiin wuxuu hordhaca ku tilmaamayaa in ujeeddada tarjumaaddu ay tahay “in laga caawiyo masiixiyiinta inay fahmaan Qur’aanka .”
Sida laga soo xigtay Spielberg, Qur’aanka la turjumay ayaa aad loo qiimeeyay. Masiixiyiintii qarnigii siddeed iyo tobnaad waxay ogaadeen qiimaha ay u leedahay ballaarinta aqoontooda Islaamka, buugga Thomas Jefferson wuxuu ahaa kii ugu iibsashada badnaa xilligaa.
Xigashada Sawirka, WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES
Qaar ka mid ah xubnah Aqalka sare e Muslimiinta ee dhawaan la doortay ayaa lagu dhaariyay nuqulkaasi. Keith Allison oo lagu dhaariyay nuqulka kitaabkan ayaa waxa uu ku tilmaamtay inuu yahay buugga caddayn u ah in “dadka haysta ay yihiin kuwa dulqaad leh oo aragti dheertahay kuwaas oo, laga soo bilaabo aasaaskiii waddankeenna, rumeystay inay aqoonta iyo xikmadda ka soo qaataan meelo badan, oo ay ka mid yahay Qur’aanka”.
Rashida Tlaib ayaa sidoo kale sheegtay inay ku dhaaratay nuqulkan Qur’aanka ah “sababtoo ah dad badan oo Ameerikaan ah ayaa dareensan in Islaamku uu ajnabi ku yahay taariikhda Maraykanka, laakiin Muslimiintu waxay halkan joogeen bilowgii dalkan.”
Israel says US booster plan supports its own...
Camped in Calais, migrants renew resolve to try...
Odayaashii maanta la kulmay Shaakh Shaakir oo shaaciyey...
Midowga Murashaxiinta: “Ma aqbali doonno doorasho aan jadwalkeedu...
Wasiirka Daakhiliga Oo Ka Hadlay Tallaabadii Laascaanood Lagaga...
Goorma Ayay PSG Heleysaa Farsamada Neymar Ka Dib...
Xildhibaan Aamina oo soo bandhigtay qodobo shaki gelinaya...
Wiil dhalinyaro ah oo Aabihiis ku dilay MUQDISHO
Bandhigga VOA: Soomaalida guryaha ka iibsada Mareykanka
Gabdhihii horay ugu guuleystay Tartanka Quruxda hablaha Afrika